Ikhaya / Umklamo wangaphakathi / Amamitha ayi-160 Esikwele eBeijing, Uhlala Wedwa, Lokho Kuphila Okuphezulu!
2020 / 11 / 10 UkwahlukanisaUmklamo wangaphakathi 3746 0
Ngamamitha-skwele ayi-160, uhlala yedwa futhi angafaka ubuntu bakhe nezinto azithandayo endlini ukwenza ikhaya lakhe elisha ngendlela afuna libe ngayo. Ngemuva kokushintshana kaningi, bathole iBeijing Jusu Design baqala uhambo lokuyilungisa khona lapho.
Isikhala sonke asinambala, njengobuntu bakhe obuthokozayo, asikaze sibe nodaka. Ukushayisana kwezinhlobo ezingaphezu kweshumi zezinto ezimpunga, futhi okumnyama nokumhlophe okunemibala esindayo, kwanele ukuletha ukunambitheka komphumela wobuciko ongavamile. Idizayini yokukhanya engenamakhaya ingashintsha indawo ezungezile yokuhamba kokukhanya, ishiye ukukhanya nokuma kuyo yonke indawo. Ukushiya okokusebenza kwendabuko okusanhlamvu kwezinkuni, ukuthungwa okunzima kwenza sonke isikhala sibe nomuzwa wesikhathi nesikhathi esizayo njengokundiza enyangeni.
Uhlelo lwendlu yoqobo:
akukho ndawo yokungena nokuntuleka kokushintshwa kwezicathulo nomsebenzi wokugcina;
ikhishi lavalwa, ukukhanya okungekho kahle nendawo encane ngenxa yokuvinjelwa odongeni, okwakhawulela indawo yokusebenza kwedeski nokushiya izinto eziningi zasekhishini zingafakwa ndawo;
kwakungekho ndawo yetafula lokudlela elingaguquguquki futhi indawo yephaseji yayinkulu, ichitha isikhala esiningi;
izindonga zesikhala sokulala sesibili zazingcolile futhi zingahlelekile;
gcina indawo yokugezela, udinga ukuhlanganisa indawo yokulala yesibili yezinguquko.
Sebenzisa udonga ukwengeza indawo yokungena neyokuhlala, ngaphandle kokuvimba ukukhanya ngesisekelo sokwandisa isilinganiso sokusebenzisa isikhala.
Ngokubhidlizwa kodonga ukuhlela kabusha indawo yekhishi eliphakathi nelisentshonalanga netafula lokudlela, yenza indawo yekhonsoli yekhishi ukuthi ikhishwe, kepha futhi kuthuthukise ukuxhumana nekhishi lasentshonalanga, futhi usebenzise indawo yephaseji ukwenza umugqa onamandla wetafula lokudlela uqedela ngokwengeziwe.
Isikhala esiphambi komnyango wokutadisha esivaliwe sivuleke ngokuphelele, nokwakhiwa kwephaseji etshekile, nohlangothi lwephaseji lebhokisi lezicathulo elibutshiwe liyananela.
4.Diliza futhi ushintshe udonga ukuze uguqule igumbi lokugezela lezivakashi libe yigumbi lokubeka, unwebise indawo yekamelo lokulala lezivakashi futhi ungeze nomsebenzi wesitoreji.
5. Igumbi lokulala lezivakashi liguqulwa libe ikamelo lokugqoka ukuze lisetshenziswe, ukuxazulula inkinga yokugcina impahla yomvakashi. Susa udonga lokwahlukanisa lwangaphakathi, shintsha umnyango uye endaweni enengqondo kakhudlwana, ekulungele ukusetshenziswa kwansuku zonke.
Phakamisa umhlabathi endaweni yokungena ngamasentimitha ayi-10 ukuze wakhe indawo eshonile, engachaza kangcono ukwahlukaniswa okusebenzayo, futhi yande intshisekelo yesikhala, isenze sicebe esigabeni sabaphathi.
Izindonga ezizungezile zifakwe ngemichilo ekhanyayo yomugqa ukwakha umumo "womlomo", kusetshenziswa ukukhanya ukwahlukanisa indawo yokungena, kwakha umoya ohlukile nomuzwa wokuqala wesiko ngemuva kokungena endlini.
Ehlangothini lomnyango wokungena, kungezwa udonga olusha lwekhabethe lokugcina. Umnyango wekhabethe ungwevu kasimende, okuwumbala ofanayo nodonga futhi uhambelana kahle nesibambo esimpunga esifihlekile.
Udonga olubheke egumbini lokuphumula ludwetshwe mnyama, olubonakala njengombala osindayo egumbini lokuphumula futhi luqhathanise nombala wosimende wokungena. Amathayili waphansi ompunga osegumbini lokuphumula, anezendlalelo ezintathu zokugrey ezigqagqene, enza kube nokuthula.
Igumbi lokuphumula lenzelwe ukukhanya okukhulu okungafakwanga, kufakwe ithrekhi yokukhanya yamagnetic ephezulu efakwe phezulu, engahlanganiswa ngokukhululekile nemichilo ekhanyayo, ivumela ukusatshalaliswa okuthe xaxa endlini nokuzwa okuzayo.
Indawo ngayinye yokukhanya ingalawulwa ngokuzimela, iletha izigcawu ezinamandla esikhaleni ukuhlangabezana nezinguquko nokwakha umoya wokukhanya ogelezayo wabaninikhaya ngezikhathi ezahlukahlukene zosuku.
Ithoni imnyama ngesitayela sezimboni, ezinokujula okuhlukile kokumpunga nokumnyama ukudala indawo enhle yokuphila. Imigqa yokuhamba egelezayo ivumela ukubuka okungaphazanyiswa, okwenza yonke indawo ikhanye futhi ivuleke.
Udonga lwasemuva kusofa lwenziwe ngodaka lwe-plasterboard, kanti i-plasterboard efakwe ngemuva kokucutshungulwa kodonga iyageleza nodonga lwasekuqaleni eceleni, ifihle izimbobo zokungenisa umoya zomlandeli omusha odongeni lokubumba nokwenza buthakathaka ubukhona bayo.
Ukuze kugwenywe isikhala esimnyama nesimhlophe esimpunga sifiphele kakhulu, imininingwane yokuhlobisa idlala indima ebaluleke kakhulu, ngezinye izinto ezincane ukugqamisa ubuntu, iqoqo labavakashi labonodoli be-KAWS liza kahle, nomoya wesikhala ayiphikisani.
Ingxenye ewumngcingo maphakathi nekhabethe lesitoreji lenze ifomu legridi evulekile, ungabonisa amanye amaqoqo akho owathandayo, iphaneli lomnyango ohlangothini lwekhabethe elinephethini elimhlophe lokulingisa, ukungezwa kwemibala ehlukene ukwenza ithoni yesikhala sekukhululekile.
Lonke udonga lwekhabethe lesitoreji lukhulise kakhulu umsebenzi wokugcina wendlu yonke, cindezela ukwakheka okuncane komnyango wekhabethe kwenza konke kucoceke futhi kube kuhle. Ngemibala yakudala emnyama, emhlophe nampunga, kunomqondo wokuyinkimbinkimbi kuyo yonke indawo.
Ukwengezwa kukasofa ompunga okhanyayo netafula eliseceleni kuthuthukisa izinga lesikhala, ukwenziwa lula futhi ngasikhathi sinye kuphula ubuthakathaka bendawo yegumbi lokuphumula, okwenza ukukhanya kubonakale kukhanya ngokwengeziwe. Itafula lekhofi lephethini lenyanga lifana nenyanga esibhakabhakeni ngokujwayelekile ekhanyayo futhi ekhanyayo, ukuze impilo ingeze umphumela omncane wobuciko.
Osomkhathi abancane abajaha izinkanyezi namaphupho, kepha futhi nokuhlola imfihlakalo yesikhala nokuphila, vumela umuntu angakwazi ukusiza kepha akhiqize ukwesaba kwemvelo.
Igumbi lokuhlala elidlula ohlangothini lodonga kusetshenziswa umugqa wokukhanya omile okwe-L ohlukanisa igumbi lokuphumula nezinye izindawo ezisebenzayo, ukukhanya okuthambile nokunethezeka futhi kudlala indima ekwehlukaniseni.
Uhlangothi lwesithombe esiphoqayo senja esibaluleke ngokukhethekile, umklami nabanikazi bangabathandi bezinja, ngesithombe somklami esidwetshwe ngesandla sekhaya lomnikazi nesipho, nakho okususelwa kubanikazi bethalente lomklami nokwazisa ukuvuma.
Ibha yokuma ekhoneni legumbi lokuphumula iwukusebenzisa isikhala ngobuhlakani, okuvumela umninikhaya ukuthi abe nezinhlobo eziningi zemisebenzi endlini. Ibha yenziwa ngamatshe, okulukhuni futhi okugqokekayo, futhi itafula liqiniswa yifulethi nohlamvu olumnyama.
Ekhoneni lebha, izesekeli ezinhle zakha ukunambitheka okuhle okushintsha isimo sempilo.
Ingemuva kwebha usebenzisa udonga ukukwenza phezulu kwekhabethe lesitoreji, ingxenye emaphakathi ingashiywa ingenalutho ukubeka imihlobiso emincane, umsebenzi wokuhlukahluka wokugcina. Ibha yamatshe kanye namatshe we-matte floor kukhombisa ukukhanya nethunzi lokulethela abantu umbono womkhathi opholile.
Ukudlula okuholela ngaphakathi kwegumbi ukwakheka okuyi-semi-curved, ngaphezulu kwezindawo ezimbili ezisebenzayo, kusetshenziswa ubujamo bolayini obuhlukile, okunikeza isikhala ikhwalithi ehlukile.
Ukukhanya okungokoqobo nokwangempela nethunzi kuhlangene esikhaleni, nolayini abanoxande abanzima bomnyango buchaza isimo esijulile futhi esithuthukile.
Ngaphandle komhlobiso omningi, ukuthula okubonakalayo kombala kakhonkolo, isibani sasebusuku se-astronaut esingakhipha ukukhanya okuthakazelisayo nesithunzi, kwenza ubusuku buthule ngokwengeziwe, bujule futhi bufinyelele kude.
Udonga lwasekhishini lokuqala olubheke egumbini lokuphumula lwadilizwa, kwandiswa isikhala ngaphandle futhi kwasebenzisa umnyango wesilayidi oshibilikayo njengesahlukaniso, esingagcini ngokwandisa indawo yekhonsoli yekhishi kepha futhi senza ukukhanya kwangaphakathi kube sobala ngokwengeziwe.
Udonga oluseduze nomnyango wekhishi lufakwe ibhodi likazibuthe, elingasetshenziswa ukulengisa ezinye izithombe, okuthakazelisayo.
Amakhishi aseChina nawaseNtshonalanga ahlangana ukudala indawo yokupheka ephelele. Ukusetshenziswa kwezibani ezikhona kunganikeza isipiliyoni esiyingqayizivele sokupheka.
Amakhabethe asendaweni yasekhishini lasentshonalanga kuhlelwe futhi ahlelwe ukwakha ulayini ojikelezayo onamandla netafula lokudlela, okwandisa kakhulu ukusetshenziswa kwendlela. Kuvulwa iwindi elincane odongeni phakathi kwekhishi lasentshonalanga nekhishi eliphakathi ukukhulisa ukuxhumana phakathi kokupheka nokudlela.
Indawo yasekhishini laseNtshonalanga khetha izibani zethrekhi namakhabethe alenga ngaphansi kwesibani sokungeniswa sokukhanyisa okusizayo, ukuze kungabikho amakhona amnyama esikhaleni, amathebula etafula lokudlela lapho ungaboni umthombo wokukhanya ngaphansi kwefulethi, ukugwema ukushukumiseka okubukwayo. Udonga kolunye uhlangothi lwekhonsoli lufakelwe isokhethi yethrekhi esezingeni eliphakeme kwezobuchwepheshe, evumela ukuguquguquka ngokulungiselela ukudla okumnandi.
Umgcini wezivakashi uhlala egumbini kuphela, kanti izindlu zangasese ezimbili zohlobo lwendlu yoqobo zingubuthakathaka obuthile, ngakho-ke igumbi lokugezela lezivakashi laguqulwa laba igumbi lokubeka ukwengeza umsebenzi wokugcina. Ikamelo lokulala lesibili lihlukaniswe nomhubhe ngekhethini lokudonsa ukuqinisekisa ubumfihlo futhi aliqinile kakhulu ngasikhathi sinye.
Ideski elenziwa ngokwezifiso liyi-ergonomic futhi lithuthukisa ukunethezeka kwehhovisi. Ukufakwa kwe-openwork roller blinds kwembula isimo sasemadolobheni esiqinile.
Ideski elifihliwe ekhoneni lingasebenza futhi lifunde ngokukhanya kwemvelo okuvela ewindini elincane ohlangothini. Umngcele ogobile we-countertop ucutshungulwa ukugwema ukuqhuma.
Ikamelo lesibili lokulala lisetshenziselwa imisebenzi eminingi, lonke udonga lwamakhabethe okugcina linciphisa kakhulu ingcindezi yesitoreji kuyo yonke indlu, futhi ifasitela lalo elihambisana nalo linamandla okugcina, futhi lingahlangabezana nezidingo zabahlali besikhashana.
Ukukhanyisa ekamelweni lokulala okuyinhlanganisela kuyinhlanganisela yefilimu ekhanyayo nokukhanya kwethrekhi, okumnene futhi okulungele ukulala nokuphumula. Indawo yokulala yokwenza ipulatifomu yokuphakama engu-20mm, ukuze kube khona ukwahlukana okucacile kwesifunda phakathi kombhede kanye nephaseji, ipulatifomu linamathele ngaphakathi kwebhande lokukhanya eliholelekile ukuze umoya wasekamelweni ufudumele ngokwengeziwe.
Isikhala esiphelele asinombala omningi kakhulu, kuzwi elimpunga lingena esikhundleni esivelele, ibhodi lekhabethe lezingubo likhetha izinto zokusanhlamvu ezimpunga ngokhuni, ukulingiswa kokuthungwa kwemvelo kukasimende kukhululekile kakhulu. Njengoba ibhodi lekhabethe liphakeme kune-2m, isidingo sangaphakathi sokufaka i-straightener ukuvimbela ukusonteka. Ukuze kuqinisekiswe ubumbano jikelele, inhlabathi yokulala nendawo yethoni iyahambisana, mbumbulu amathayili okusanhlamvu ngendwangu ebukwayo ethambile ngasikhathi sinye ukudambisa umuzwa onzima.
Izinto zokushibilika ekamelweni lokulala ziyahambisana namathayili aphansi, amathayili esitezi sokuqala azocutshungulwa abe ngosayizi ofanele, bese kuba phansi kodonga lwe-grooving, ngemuva kokufakwa kwe-skirting kanye ne-flush nodonga.
Ikhanda lombhede wasekamelweni kanye nodonga ngefasitela kwakupendwe ngopende wosimende, kunikeza umuzwa onokhahlo nowakudala, okwenza isitayela sezimboni sikhombise ukubukeka okuthe xaxa. Ingemuva kombhede kufakwe i-backdrop enombala osindayo enhloko yombhede ukunikeza isikhala ithoni ethe xaxa. Umugqa wonke wamatafula asembhedeni wombhede ungezansi muhle futhi uyasebenza, kanti okokugcina isitoreji nabo bangabamba izingcezu nezingcezu zemfuhlumfuhlu yokulala.
Ukukhanya kwelanga kuchitha izimpumputhe zaseVenice phansi, kuphonsa ukukhanya okufiphele nezithunzi.
Itafula eliseceleni kombhede lihlanganiswe nesithombe esibucayi sopende lobuciko, okwenza isikhala sibonakale sicacile futhi sihle.
Isikhala futhi siyinhlanganisela yezinto ezintathu ezimpunga. Umphumela wesibuko womnyango wekhabethe ukhombisa ukukhanya ukuze kukhanye isikhala, futhi nekhabethe lobucwebe eliphakathi lihlala liveza isimo esihle.
Udonga lwendlu yokugezela namathayili aphansi asengxenyeni eyodwa, zombili ngombala ompunga, futhi ukusetshenziswa kwamakhethini eshawa kungahlukaniswa kahle ezindaweni ezimanzi nezomile. Sebenzisa udonga ohlangothini lukasinki ukwenza amakamelo avulekile, ingilazi emnyama njengesahlukaniso, wonga isikhala esiningi kusinki.
Uhlobo olubandayo lwesimende olubandayo lwesamente olusetshenziswa njengendawo yokugeza ikhabethe lekhabethe, i-black matte Hardware enombala ophuzi wokuphakama we-countertop.
Udonga olulenga ohlangothini lwendlu yangasese lekhabethe elibekiwe elibekwe ohlangothini lweqoqo lamahostela lama-aromatherapy ahlukahlukene, qaphela imininingwane eboniswe ngokucacile. Umnyango wekhabethe lengilazi kanye nokuhlanganiswa kokukhanya ukuze inhlanganisela yezinto zibukeke zigcwele isitayela, umnyango wesibaya esimnyama omnyama ngeke uthathe isikhala sangaphakathi sendlu yokugezela, enhle futhi esebenzayo.
Ikheli: Beijing Xishan Artscape
Indawo: Amamitha ayisikwele ayi-160
Isitayela: indlu yesimanje elula
Uhlobo: amakamelo amathathu
Isabelomali: 1.1 million
Edlule :: Amamitha ayisikwele angama-78 Umndeni Wabane, Lo Mklamo Uphezulu Kodwa Futhi Khombisa Okukhulu! Olandelayo: Lena Incazelo Ephelele Ngetshe Le-Ultra-Thin!
2020 / 12 / 12 3055
2020 / 11 / 29 3741